एक जालसाजी जीवनसाथी समात्न GPS ट्र्याकिंग प्रयोग गर्दै सिंगापुर शीर्ष मिनी जीपीएस निजी ट्र्याकर ऑटिज्म / अटिस्टिक किड्स र डिमेन्शिया बुजुर्गका लागि
संसार हरेक र प्रत्येक बित्दै जाँदैछ। हामी दिनहुँ नयाँ आविष्कारहरू देख्न सक्छौं। यस दरमा, मानिस अचम्मको ग्याजेटहरू र उपकरणहरूले भरिएको सम्पूर्ण नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ। आधुनिक र उदात्त आविष्कारहरूको यस सागरमा GPS को आविष्कार भएको छ। त्यसोभए, GPS के हो? हामी यसमा द्रुत नजर राखौं, र त्यसपछि हामी यस बारे थप छलफल गर्नेछौं।
GPS ट्र्याकिंग प्रणाली के हो?
GPS भनेको "ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम" हो। जीपीएस ट्र्याकिंग प्रणालीमा पोर्टेबल उपकरणहरू हुन्छन् जसले मानिसहरूलाई एकै पल्टमा उनीहरूको स्थानहरू मोनिटर गर्न र ट्र्याक गर्न अनुमति दिन्छ। यो कुनै पनि सवारी या कुनै पनि समय कुनै पनि व्यक्तिको सही स्थान इंगित गर्न सक्दछ। GPS का अन्य धेरै अनुप्रयोगहरू पनि छन्। यो गति, दूरी र समय गणना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो एक चोरी वाहन पक्रन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र पनि, यो एक धोका पति / पत्नी पकड गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
के हामी एक जीपीएस को उपयोग गर्न एक धोखा पति या पत्नी पकड गर्न सक्नुहुन्छ?
ठिक छ, यदि हामी पहिले देख्छौं भने यो अलिक अनौंठो देखिन्छ। जस्तै, एक जीपीएस ट्रैकर को उपयोग गरेर एक धोखा पति जोडी क्याच? तर यदि हामीले यसलाई स्पष्ट रूपमा देख्यौं भने हामी बुझ्दछौं कि एक जालसाजी जीवनसाथी समात्नको लागि जीपीएस प्रयोग गर्नु यो उत्तम तरिका हो। हामी देख्न सक्छौं कि GPS को एक विशिष्ट व्यक्तिको स्थान औंल्याउनुको मूल उद्देश्य छ। एक धोखा जीवनसाथी को मामला मा, आधारभूत आवश्यकता धोका हो कि मानिन्छ कि व्यक्ति ट्र्याक गर्न छ। त्यसो भए, उत्तरको लागि, हो! हामी गर्न सक्दछौं र हामीले एक जालसाजी जीवनसाथी समात्नको लागि GPS ट्र्याकर प्रयोग गर्नु पर्छ।
दुर्भाग्यवस, विवाहमा समस्याहरू एक साझा समस्या हो। जो कोही पनि आफ्नो विवाहित जीवनमा यो समस्या हुन सक्छ। र जो कोही पनि वकिल, एथलीट, र प्रसिद्ध व्यक्तिहरु को लागी शिकार हुन सक्छ।
सबै भन्दा, यदि सबै भन्दा सुन्दर र धनी मानिसहरु आफ्नो राम्रो आधा विश्वासी राख्न सक्दैनन्, हामी संग के अवसर छ? लामो समयसम्म विवाह गर्दा समस्याहरू बढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ किनकि सम्बन्धहरू समयको साथ साथ कमजोर हुँदै जान्छ। कहिलेकाँही, त्यस्ता सम्बन्धहरूमा व्यक्तिहरूले अरू कसैलाई सान्त्वना दिन थाल्छन्। यो त्यहि हो जहाँ यो डाउनहिल जान सुरु हुन्छ। यो धेरै लामो साझेदारीको गन्दा सत्य हो कि त्यहाँ प्रलोभन र निराशाहरू छन्, जुन सबैले विनाशकारी परिणामहरूसँगको सम्बन्धमा पुर्‍याउँछ।
किन GPS प्रयोग गर्दै?
यदि हामीले स्पष्ट रूपमा देख्यौं भने हामी बुझ्नेछौं कि जीपीएस नै एक धोखाको जीवनसाथी समात्न उत्तम तरिका हो। मानौं, यदि दम्पती त्यस्तै समस्यामा परे, तिनीहरूले दिन प्रतिदिन झन् झन् संदिग्ध विकास गर्न थाल्नेछन्। यसले उनीहरूको सम्बन्धलाई कमजोर बनाउनेछ र चरम अवस्थाहरूमा, यसले उनीहरूको बिछोडको परिणाम दिन्छ। तर यदि तिनीहरूले ठगी व्यक्तिलाई पक्रन एक राम्रो र सक्षम उपकरण प्रयोग गरे भने तिनीहरू केवल कुराकानी र कुराकानी गरेर उनीहरूको समस्याहरू हल गर्न सक्छन्। त्यसो भए, सबै ट्र्याकिंगहरू सकारात्मक प्रयोग हुने छ र सरल उपकरणहरूले तिनीहरूको भविष्यको जीवन बचाउनेछ।
जीवनसाथीले धोका दिईरहेको छ भने एक व्यक्तिलाई कसरी थाहा हुन्छ?
सम्बन्धमा समस्याहरू प्रत्येक जोडीको लागि फरक हुन्छन् तर त्यहाँ केही सामान्य र स्पष्ट स are्केतहरू छन् जुन एक व्यक्तिको धोकामा स्पष्ट पार्छ। एउटा प्रमुख कारण अचानक असुरक्षा हो। उदाहरण को लागी, अचानक, एक व्यक्ति को लागी आफूलाई असुरक्षित महसुस लाग्छ आफ्नो साथी संग बसिरहेको बेला। यसले धोखाको चिन्ह देखाउँदछ। प्रायः जसो दम्पतीले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन सँगै बिताउँछन् त्यसैले उनीहरू प्राय: एक अर्काको बानीको बारेमा जान्न सक्छन्। यदि सबै अचानक, एक व्यक्ति फरक फरक व्यवहार देखाउँदछ भने यो धोखाको संकेत हो। एक मोबाइल फोन पनि एक धेरै राम्रो स्रोत हो धोखा पति / पत्नी जाँच गर्न को लागी।
GPS प्रयोग गरी एक धोखा पति / पत्नी कैच गर्दै:
हामीले जीवनसाथीले धोका दिइरहेको छ कि छैन भनेर जाँच्न धेरै तरिकाहरू छन्। जीपीएस ट्र्याकिंग प्रणाली हामीलाई एक धोखा जीवनसाथी पकड को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका प्रदान गर्दछ। केहि तरिकाहरू हेरौं जुन सकारात्मक आउटपुट प्रदान गर्न सक्दछ।
प्राय: त्यहाँ दुई प्रकारका जीपीएस ट्र्याकरहरू यस उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ:
वाहन ट्र्याकर, नामले स indicates्केत गर्दछ, विभिन्न प्रकारका सवारीहरूको ट्र्याकिंगको लागि प्रयोग गरिन्छ। एकले ट्र्याकरलाई उसको / उनको उत्तम-आधाको गाडीमा जोड्न आवश्यक पर्दछ। यो एक धातु चुम्बकीय कन्टेनरमा आउँदछ जुन सजिलैसँग कुनै पनि सवारी शरीरसँग जोड्न सकिन्छ। बक्स भित्र, जीपीएस ट्र्याकर छ कि उपग्रह संग जोडिएको छ। यसले गाडीलाई निर्धारित गर्दछ र अन्य व्यक्तिलाई अपडेट गर्दछ। त्यसोभए, यदि तपाईंको राम्रो-आधाले भन्छ कि ऊ / उनी एक निश्चित स्थानमा छ, तपाईं सजिलै ट्र्याकरको स्थिति पत्ता लगाएर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले, एक उनको / उनको धोखा पति / पत्नी समात्न सक्दछ।
अर्को एक व्यक्तिगत ट्रैकर हो। यसले गाडी ट्र्याकरको समान कार्य गर्दछ तर यसको प्लेसमेन्ट केही फरक छ। यो सानो कन्टेनरको आकारमा आउँदछ जुन यसमा GPS ट्र्याकर छ। कन्टेनर जेबमा वा अन्य व्यक्तिको झोलामा राख्न सकिन्छ। गाडी ट्र्याकरमा यसको केही फाइदा छ। सामान्यतया, सडकको छेउमा सवारीसाधन पार्क गर्न सकिन्छ र त्यसबाट व्यक्ति आफूले चाहेको ठाउँमा हिंड्न सक्छ। त्यसकारण, यो ट्र्याकिंग एक वाहनमा सीमित छ जबकि व्यक्तिगत ट्र्याकिंग कम सीमित छ। तर उही समयमा यसको एक बेफाइदा पनि छ। व्यक्तिगत ट्र्याकरहरू सजिलैसँग देख्न सकिन्छ र यदि याद गरेमा सजिलैसँग समात्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ, गाडी ट्र्याकरहरू समात्न कम सम्भावना हुन्छ किनकि ती फेला पार्न गाह्रो छ।
के यो एक जीपीएस ट्रैकरको साथ तपाईंको जीवनसाथी ट्र्याक गर्न कानूनी हो?
यस कुराको बारेमा त्यहाँ धेरै द्वन्द्व र समस्याहरू छन्। केही कानून व्यवसायीहरूले जीपीएस ट्र्याकरको प्रयोग गरेर एक पति / पत्नीलाई ट्र्याक गर्न अनुमति दिएका छन्, जबकि विश्वको केही भागहरूमा, यो तपाईंको पति या पत्नीलाई धोका दिईएको संदिग्ध ट्र्याक र मोनिटर गर्न कानूनी छैन। तर यदि हामीले सरल शब्दहरूमा भन्‍यौं, जुन हामीले माथि हेर्‍यौं, एक सम्बन्ध कमजोर हुँदै जान्छ, शंका बढ्दै जाँदा। त्यसो भए, यदि एकले आफ्नो पार्टनरलाई ट्र्याक गर्न ट्र्याकर प्रयोग गर्दछ, ऊ / उनी धोखामा पक्रिए पनि, दम्पतीले कुरा गर्दै समस्या समाधान गर्न सक्दछन्। एक अर्कामा श having्का गर्नु भन्दा यो उत्तम हो। त्यसकारण, मेरो विचारमा, एक जीपीएस ट्र्याकरको प्रयोग गरेर एक धोका दिईएको जीवनसाथी ट्र्याक गर्नुहोस्।
6383 कुल दृश्यहरू 14 हेराइ आज